Deeqaha ICCR ee loogu talagalay ardayda Bangladesh 2021/2022 Cusbooneysiinta Xariirka: Warka Dugsiga ee Hadda
Deeqaha ICCR ee loogu talagalay Ardayda Bangladesh 2021/2022 Cusbooneysiinta Xariirka
Deeqaha ICCR ee ardayda Bangladesh: Halkan waxaa ku yaal wax xiiso u leh ardayda Bangladesh. Waxaa jira deeq waxbarasho adiga. Tan waxaa bixiya Golaha Xiriirka Dhaqanka ee Hindiya (ICCR).
Si taxaddar leh u akhri faahfaahin buuxda.
Ardayda Bangladesh way dalban karaan Deeqda waxbarasho ee ICCR 2021. Qodobadani waxay ku siinayaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee aad u baahan tahay inaad ogaato. Sidoo kale, waxay ka jawaabtaa qaar ka mid ah Su'aalaha la Weydiiyo ee ku saabsan ICCR deeq waxbarasho. Qodobkaan waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan:
Waa maxay deeq waxbarasho?
Golaha Hindida ee xiriirka dhaqanka (ICCR).
Waxaa la aasaasay xarumaha dhaqanka ee ICCR.
Qaar ka mid ah howlaha golaha Hindida ee xiriirka dhaqanka (ICCR).
Deeqaha waxbarasho ee ICCR 2021.
Shuruudaha foomka dalabka deeqda waxbarasho ee ICCR 2021.
U qalmida deeqda waxbarasho ee ICCR 2021-22 Bangladesh.
Sida loo dalbado deeqda waxbarasho ee ICCR 2021.
Taageerida Dukumiintiyada loogu talagalay deeqaha waxbarasho ee ICCR.
Xilliga kama dambaysta ah ee dalabka ee deeqda waxbarasho ee ICCR 2021.
Waa muhiim inaad tan ogtahay. Ku ICCR Deeqda waxbarasho ee 2021 waxay wax ka qabataa culeyska dhaqaale ee ardayda. Sidoo kale, waxay wax ka qabataa culaysyadan muddada daraasadda oo dhan. Sidan oo kale, haddii aad xaq u leedahay, fadlan ogow. Waxaad ku jirtaa ogeysiiskan lagugu soo oogay inaad dedejiso oo aad dalbato.
Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan inaad ogaato waxa uu yahay deeq waxbarasho inta aynaan horumarin.
A deeq waxbarasho waa abaalmarin gargaar lacageed oo loogu talagalay ardayda si ay u sii wataan waxbarashadooda. Deeqaha waxbarasho waxaa lagu bixiyaa iyadoo lagu saleynayo shuruudo kala duwan. Si kastaba ha noqotee, badanaa, waxay ka tarjumayaan qiyamka iyo ujeeddooyinka deeq bixiyaha.
Sidoo kale, waxay ka tarjumayaan aasaasaha abaalmarinta. Deeqda lacagta looma baahna inuu ardaygu dib u bixiyo.
Golaha Hindida ee Xiriirka Dhaqanka (ICCR)
Intaad tixgelinayso deeqda waxbarasho ee ICCR 2021, fadlan ogow. Kafaaladda deeqaha waxbarasho waa Golaha Hindida ee Xiriirka Dhaqanka (ICCR). ICCR waa urur madaxbanaan. Waxay ka tirsan tahay dowladda Hindiya.
Sidoo kale, waxay ku lug leedahay xiriirka dibadda ee Hindiya. Tani waxay ku timid is-weydaarsiga dhaqameed ee lala yeesho waddamada kale iyo dadkooda. Waxaa la aasaasay 9-kii Abriil, 1950. Sidoo kale, waxaa aasaasay Maulana Abul Kalam Azad.
Maulana Abul Kalam Azad wuxuu ahaa wasiirkii ugu horeeyey ee waxbarasho ee madaxbanaan India. Xarunta dhexe ee ICCR waxay ku taal Azad Bhavan, IP Estate, New Delhi. Sidoo kale, waxay xafiisyo goboleed ku leedahay:
Bangalore, Chandigarh, Chennai, Cuttack iyo Goa.
Sidoo kale, waxay ku leedahay Guwahati, Hyderabad, iyo Jaipur.
Intaa waxaa sii dheer, waxay ku leedahay Kolkata, Lucknow, iyo Mumbai.
Intaa waxaa sii dheer, waxay ku leedahay Patna, Pune iyo Shillong.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, Thiruvananthapuram iyo Varanasi.
Waxaa la aasaasay Xarumaha Dhaqanka ee ICCR
Goluhu wuxuu ka shaqeeyaa ergooyinka caalamiga ah. Tani waxay la jirtaa xarumo dhaqan oo la aasaasay:
Georgetown, Paramaribo, Port Louis, Jakarta, Moscow iyo Valladolid.
Sidoo kale Berlin, Qaahira, London iyo Tashkent.
Intaas waxaa sii dheer, mid kale ayaa jira oo ku yaal Almaty, Johannesburg iyo Durban.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa ku yaal Port of Spain iyo Colombo.
Fadlan ogow. ICCR waxay xarumo dhaqameed cusub ka furtay Dhaka, Thimpu iyo Sao Paulo. Oo iyana waxay kaloo ku leeyihiin Kathmandu, Bangkok, Kuala Lumpur, iyo Tokyo.
The Deeqda waxbarasho ee ICCR 2021 waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah kaas oo ICCR ay ku siiso caawimaad. Caawimadan waxaa loogu talagalay ardayda Hindida iyo Bangladesh labadaba.
Qaar ka mid ah Hawlaha Golaha Hindida ee Xiriirka Dhaqanka
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah howlaha ICCR:
Waxay heleen oo hayeen Nuqul ka mid ah figrada Hindida ee Shiva Nataraja. Tani waa deeq loogu talagalay Matxafka Farshaxanka Aasiya ee Corfu, Greece.
Sidoo kale, Goluhu wuxuu wax ka qabtaa waajibaadkiisa iyadoo loo marayo hawlo ballaaran. Waajibaadkaani waa diblomaasiyadda dhaqanka.
Marka lagu daro abaabulka xafladaha dhaqanka ee Hindiya iyo dibedda, fadlan ogow. ICCR waxay dhaqaale ahaan taageertaa tiro ka mid ah hay'adaha dhaqanka ee ku baahsan Hindiya.
Sidoo kale, ICCR waxay kafaala qaadeysaa shaqsiyaadka jilayaasha qoob ka ciyaarka. Sidoo kale, muusikada, sawir qaadista, tiyaatarka, iyo farshaxanka muuqaalka ah.
Intaas waxaa sii dheer, waxay maamushaa Abaalmarinta Jawaharlal Nehru ee Fahamka Caalamiga ah. Tan waxaa aasaasay Dowladda Hindiya 1965.
Sidoo kale, ICCR waa kafaala-qaadaha deeqda waxbarasho ee ICCR 2021.
Deeqaha ICCR ee ardayda Bangaladesh 2021-22
Waa muhiim inaad tan ogtahay. ICCR waxay bixisaa deeq waxbarasho oo dhan 1804 sanad walba. Kani wuxuu matalayaa dowladda Hindiya. Waa in ardayda caalamiga ah. Gaar ahaan kuwa doorta inay wax ku bartaan farsamooyin farshaxan iyo dhaqameed kala duwan oo ku yaal Hindiya. Ardayda ka socota in ka badan 70 dal ayaa ka faa'iideystay qorshahan.
Sidoo kale, fadlan la soco tan. Deeqaha ICCR ee 2021 waxaa la siiyaa muwaadiniinta Bangladesh. Tani waxay daboolaysaa shahaadada koowaad ee jaamacadeed, ka-qalin-jabinta iyo heerka PhD ee Hindiya. Si kastaba ha noqotee, marka laga reebo Daawada. In ka badan 3000 ICCR Deeqo ayaa la siiyay ilaa maanta.
Sidoo kale, deeqaha waxbarasho ee ICCR waxaa la siiyaa muwaadiniinta reer Bangladesh ee sharafta leh. Tani waxaa loogu talagalay oo keliya shahaadada koowaad, boosteejo iyo PhD.degrees. Dowladda Hindiya waxay illaa iyo hadda siisay deeqda waxbarasho ee loo yaqaan 'ICCR Scholarship' qiyaastii 3000 oo muwaadiniin Bangaladesh ah. Sanad dugsiyeedka 2021, fadlan ogow. Deeqaha soo socda ayaa la siiyaa:
Qorshaha deeqda waxbarasho ee Bangladesh. Tani waxaa loogu talagalay injineernimada Waxay ka kooban tahay Bachelor, Postgraduate iyo PhD.
Qorshaha deeqda waxbarasho ee Bharat. Waxay ka kooban tahay Bachelor, Postgraduate iyo PhD.
Shuruudaha loogu talagalay Deeqaha ICCR ee Ardayda Bangladesh
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah shuruudaha deeqdan waxbarasho:
Sawir cabir baasaboor dhawaan aan ka badnayn 3.5 × 4.5cm (25kb). Waa in lagu galiyaa foomka dalabka booska la bixiyay. Waa inuu noqdaa asal cad oo aan lahayn muraayadaha indhaha.
Sidoo kale, gali nuqullada dhammaan shahaadooyinka tacliimeed. Nuqulada shahaadooyinka iyo waraaqaha calaamadaha waa in la soo dhejiyaa. Tani waa inay kujiraan kuwa laxiriira imtaxaanka iskoolka.
Intaas waxaa sii dheer, shahaadada jir dhiska ee foomka loo qoray.
Iyo, talooyinka / shahaadooyinka dabeecadda ee dugsiga / Jaamacadda jirta.
Nuqulo la xaqiijiyay oo ka mid ah boggaga khuseeya ee baasaboorka ansax ah ayaa loo baahan yahay. Tani waxay muujineysaa sawir, magac, faahfaahinta xiriirka iyo taariikhda la soo saaray. Sidoo kale, waxay muujineysaa taariikhda dhicitaanka iyo meesha lagu bixinayo. Fadlan hubi in baasaboorkaagu shaqeynayo inta koorsada aad codsatay.
Sidoo kale, waqtiga la soo dirayo dukumiintiyada loo baahan yahay, la soco. Si naxariis leh u hubso in dhammaan dukumiintiyada si sax ah loogu soo rogo qaybta la siiyay.
Shahaadooyinka / dukumiintiyada asalka ah waa inuu qaadaa Codsadaha haddii la ogolaado. Tani waxaa loogu talagalay xaqiijinta jaamacadda / Machadka ay khusayso waqtiga ku biirista. Tani waa shuruud qasab ah. Haddii kale gelitaanka waxaa kansali kara Jaamacadda / Machadka.
Koorsooyinka injineernimada, waa inaad haysataa Fiisigis, Kimistariga & Xisaabta (PCM). Tani waa inay ku jirtaa imtixaannada ka baxa dugsigaaga. Tani waa sababta oo ah iyagu waa qasab.
Musharrixiinta waxaa laga codsanayaa inay ka dalban karaan bogga oo ay la socdaan faahfaahinta khasabka ah ee faahfaahinta shaqsiyadeed / Tacliineed: Lambarka Baasaboorka. Caddaynta Da'da Si kooban oo faahfaahsan haddii loo eego Ph.D. musharixiinta
U-qalmitaanka deeqda waxbarasho ee ICCR ee ardayda Bangladesh
Si aad ugu qalanto deeqda waxbarasho ee ICCR 2021, fadlan fiiro gaar ah u yeelo. Waa inaad ka timaaddaa Bangladesh.
Sidoo kale, waa inaad haysataa shahaadada BE / B Tech. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad dalbataa koorsada.
Shuruudaha Luqadda Ingiriisiga
Sidoo kale, waa inaad ku fiicantahay Ingiriisiga. Waa inaad kaqeybqaadataa 30-ka daqiiqo ee imtixaanka aqoonta Ingiriisiga. Waqtiga iyo goobta ayaa la shaacin doonaa. Waana inaad ugu yaraan 60% calaamado ku leedahay imtixaanka la dhaafay. Ama, ugu yaraan 3 GPA 5.
Sidoo kale, waa inaad ahaataa ugu yaraan 18 jir da'da Julaay 2021. Fadlan ogow. Dhammaan ardayda waa inay joogaan hoteelada. Looma reebi karo sababo qoys / caafimaad awgood in dibedda la joogo la madadaaliyo. Tani waxay ku saleysan tahay sharciyada ICCR.
Sida loo Codsado Deeqaha ICCR ee Ardayda Bangladesh
Si aad uga codsato khadka tooska ah ee ardayda danaynaysa, fadlan ogow. Waxaad ubaahantahay inaad sameysato aqoonsi gaar ah oo lagusoo galo iyo erey sir ah. Waxaa lagaa codsaday inaad ka dalbato khadka tooska ah tilmaamaha. Sidoo kale, fadlan hayso qodobbada soo socda inta lagu gudajiro hawsha arjiga.
Kuwa leh BE / B Tech. waa inuu dalbadaa koorsada. Sidoo kale, manhajkooda iskuulka-kulleejku waa inuu ku jiraa Fiisigiska, Xisaabta, iyo Kimistariga.
Sidoo kale, da'daadu waa inay noqotaa 18 bisha Luulyo 2021.
Intaas waxaa sii dheer, dhammaan ardayda waa inay joogaan hoyga. Dibedda ma noqon karto sababo qoys iyo caafimaad la'aan.
Taariikhda ugu dambeysa ee soo gudbinta arjiga internetka waa Janaayo 20, 2021. Waqtigu waa 5.00 pm Sabtida. Waa inaad kaqeyb qaadataa 30-ka daqiiqo ee imtixaanka aqoonta Ingiriisiga.
Taageerida Dukumiintiyada loogu talagalay deeqda waxbarasho ee ICCR
Hoos waxaa ku yaal dukumiintiyada lagu lifaaqayo inta lagu jiro codsiga:
Nuqul la tijaabiyey oo dhan shahaadooyinka tacliinta iyo qoraallada ku qoran Ingiriisiga.
Sidoo kale, nuqul caddayn ah oo baasaboor muujinaya bogagga biometric.
Intaa waxaa sii dheer, nuqul caddeyn ah Shahaadada Dhalashada oo Ingiriis ah.
Soo jeedin cilmi baaris ah oo loogu talagalay M Phil, Ph.D. ama Shahaadada Dhakhtarka Kadib.
Sidoo kale, Shahaadada Caafimaadka Caafimaad. Waa inuu la yimaadaa warbixinnada imtixaanka. Raac Qaabka laga heli karo bogga xariirka.
Intaas waxaa sii dheer, laba warqadood oo talo bixin ah. Waraaqaha talobixinta waxaa lagama maarmaan ah in lagu xuso waxyaabaha soo socda: Magaca, magacaabista, cinwaanka emaylka, taleefan lambar iyo cinwaanka qofka soo saaray.
Sidoo kale, sawir midab leh. Tani waa inay ahaataa wejiga hore oo aan lahayn muraayad. Waa inuu noqdaa asal cad
Si aad u dalbato deeqdan waxbarasho ee ICCR ee 2021 Bangladesh, raac xiriirkan LAMBARKA CODSIGA
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta ee deeqda waxbarasho ee ICCR 2021
Ma jiro waqti go'an weli. Sidan oo kale, soo gudbinta ee codsiga kalfadhiga 2021-2022 ayaa u socda ardayda Bangladesh.
1. Waa maxay ICCR?
Waa soo gaabin u taagan Golaha Hindida ee Xiriirka Dhaqanka.
2. Ayaa U Qalma Deeqaha ICCR ee 2021?
Ardayda Bangladesh waxay dalban karaan deeqda waxbarasho ee ICCR 2021.
3, Waa kuma kafaala-qaadaha deeqda waxbarasho ee ICCR?
Tan waxaa bixiya Golaha Xiriirka Dhaqanka ee Hindiya (ICCR).
4. Waa maxay waqtiga kama dambaysta ah ee deeqda waxbarasho ee ICCR 2021?
Ma jiro waqti go'an weli. Sidan oo kale, soo gudbinta arjiga kulanka 2021-2022 ayaa u socota ardayda Bangladesh.
5. Miyaa qofku iska diiwaan gelin karaa khadka tooska ah?
Soo koobid, fadlan ogow xusuus. Muwaadin ahaan Bangladesh wax badan ayaad kaga faa'iideysan kartaa fursaddan. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah inaad ku sameyso cilmi baaris dheeraad ah tan. Sidoo kale, waxaad xor u tahay inaad iska qorto / wadaagto macluumaadkan.
Intaas waxaa sii dheer, waad ku wadaagi kartaa baraha bulshada. Fikradda wadaagga ayaa ah inay caawin karto qof. Sidan oo kale, wadaagidaadu waxay noqon kartaa qof u sameynaya wanaag weyn.
Jadwalka Toddobaadka Ardayda DELSU ee Waxqabadyada 2015/16 waa baxay
UNIZIK Xafladaha Matriculation Date 2020/2021 Check Check Online
Wadarta / NNPC Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee Qaranka 2020 - Sida loo Codsado
Caqabadaha Cinwaanada ee Filimada Kannywood: Faa’iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Hada Ka Codso Shirkadaha Gaarka Loo Leeyahay Nigeria Shaqo Maamulaha Xisaabaadka Iibka ee Abuja - 2016
Shaqo qorista Xaddidan Bell Oil and Gas 2018/2019 iyo Sida Loo Codsado Shaqooyinka
Koorsooyinka Polytechnic-ka ee Axdiga iyo Shuruudaha 2020 Fiiri Liistada Koorsada oo Buuxda
« Apple WWDC Scholarship 2021/2022 Eeg Xariirka Cusboonaysiinta Codsiga
Foomka Codsiga ee Shaqaalaynta Beesha Dhaqaalaha Dawladaha Galbeedka Afrika 2021 »
BBN 2021 Gabdhaha Guryaha - Baro iyaga
Cusboonaysiinta Qorista Difaaca Madaniga 2021 Eeg Shuruudaha Codsiga
Xariirka Shaqaalaynta Difaaca Rayidka 2021 iyo Cusboonaysiinta Muhiimka ah
Qorista Difaaca Madaniga www.nscdc.gov.ng 2021 Eeg Xariirka Arjiga
Citibank Nigeria Portal Job Portal 2021 www.citigroup.com
Qorista Difaaca Madaniga 2021/2022 Hubi Xiriirkii Ugu Dambeeyay ee Codsiga NSCDC